FreeOffice 6.1.2 iri pano ine zvinopfuura makumi manomwe zvigadziriso | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Gwaro Foundation yakazivisa kuwanikwa kwazvino kweiyo yechipiri yekugadzirisa kugadzirisa yeazvino akateedzana ehofisi yemahara suite LibreOffice 6.1.
Kusvika mavhiki maviri chete mushure mekutanga kugadzirisa kugadzirisa, FreeOffice 6.1.2 iri pano kugadzirisa 70 bugs yakawanikwa neboka rekusimudzira kana rakataurwa nevashandisi vachishandisa iyo yekuburitsa system muzvikamu zvakasiyana zve suite
Kuvhurwa kweichi chechipiri kugadzirisa kugadzirisa kunouya mumazuva e LibreOffice Conference 2018, chiitiko chinoitika muTirana, Albania uye chakatsaurirwa kune ino hofisi suite.
FreeOffice 6.1.3 inotarisirwa muna Gumiguru 2018
Vese vashandisi veLibreOffice 6.1 vanokokwa kuti vavandudze kuiswa kwavo kuRibreOffice 6.1 yekugadzirisa kugadzirisa. Zvisinei, Iyo Gwaro Sisekelo ichiri kukurudzira LibreOffice 6.1 chete kuvashandisi vemberi uye vanhu vanoda kuyedza nhau, kumakambani uye vashandisi vatsva, TDF inokurudzira kugara mune yakagadzikana LibreOffice 6.0 nhevedzano, inozopedza kutenderera kwayo munaNovember 26 yegore rino.
LibreOffice 6.0 ichave neyakagadziriswa nyowani pamberi pehupenyu hwayo, LibreOffice 6.0.7, inotarisirwa kurova mumigwagwa mukupera kwaGumiguru padivi pe chechitatu kugadzirisa kweLibreOffice 6.1 dzakateedzana. Kusvika panguva iyoyo, Iyo Gwaro Foundation inokurudzira kuti makambani nevashandisi vatsva vaise LibreOffice 6.1, ichivhara kutenderera kwayo kusvika Chivabvu 29, 2019.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » FreeOffice 6.1.2 iri pano ine zvinopfuura makumi manomwe zvigadziriso